Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo kulan albaabada u xiran la leh Guddoomiye Mursal - Jowhar Somali news Leader
Home News Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo kulan albaabada u xiran la leh...
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo kulan albaabada u xiran la leh Guddoomiye Mursal
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran ayaa xilligan kulan albaabada u xiran waxaa ay hoygiisa kula leeyihiin Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Kulankan ayaa ah mid qorsheysan oo Madaxweyanyaashii hore si gaar gaar ah ula yeelanayaan Guddoonka Labada Gole ee Baarlamaanka, waxaana ay ku hormareen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal.
Madaxweynayaashii hore oo xilligan ah mucaaradka ugu weyn ee Madaxweyne Farmaajo uu cadaadiska kala kulmayo ayaa mowqifkooda ku aadan in doorashada waqtigeeda ku dhacda u gudbin doona Guddoomiye Mursal, sidoo kale waxaa ay la wadaagi doonaan aragtidooda ku aadan in la helo hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay, ayna isla ogol yihiin saamileyda siyaasadda.
Waxaa la filayaa in Madaxweynayaashi hore ay la wadaagaan Guddoomiye Mursal aragtidooda ku aadan kalfadhigii shalay ee Baarlamaanka iyo buuqii lagu furay Madaxweyne Farmaajo markii uu khudbeynayay, iyo waxyaabihii uu ka hadlay.
Mucaaradka ayaa qaba in Madaxweyne Farmaajo aanu si waaqici ah uga hadlin xaalada dhabta ah ee dalka, maadaama dalku galayo marxalad kala guur siyaasadeed oo loo baahan yahay in si wadar-ogol looga gudbo.
Dhinaca kale waxaa la filayaa in Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran ay kulan gaar ah la yeeshaan Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.